Fahazarana haino aman-jery sosialy 10 ho an'ny varotra B2B
Alatsinainy Desambra 6, 2010 Alahady Oktobra 19, 2014 Douglas Karr
Tamin'ny volana Aogositra, Softchoice nandefa fanadihadiana tamin'ny mpanjifany ary nahazo valiny nahatratra 1,444 1,200, nisolo tena ireo orinasa kely sy salantsalany (SMB) mihoatra ny 71, orinasa, sehatra ho an'ny daholobe ary fikambanana fanabeazana. 50% ny valinteny dia ao amin'ny IT ary ny santionany dia 50 isan-jato amerikanina ary XNUMX isan-jaton'ny fikambanana kanadiana - tena solontenan'ny tontolon'ny asa any Amerika Avaratra.
Lafiny iray amin'ny fampisehoana tokony hihiaka ny Wordle fanehoana ireo fanamarihana: Votoatiny mifandraika sy ara-potoana mila izany misambotra fahalianana and be voasoratra fohifohy!
Ireto misy fomba fijery fanampiny avy amin'ny zavatra hita:
Tags: b2bb2b marketingfanabeazanaorinasa orinasaitMari Smithorinasa antononyRadio MTBsehatra ho an'ny daholobeMarketing marketingfandraharahana madinikasmbsoftchoicefanadihadianafanadihadiana
He, heck. Heveriko fa hanomboka orinasa marketing aho!
Faminaniana momba ny teknolojia 10 ambony ho an'ny 2011 i Gartner
Dec 29, 2010 amin'ny 3: 22 AM
Doug, famintinana slide mahasoa sy fanavaozana horonan-tsary momba ny fikarohana nataon'i Softchoice ity (na dia nahatsapa aho fa somary 'niditra' tamin'ny safidiny ny manodidina lol)
Indraindray aho manontany tena hoe firy ny orinasa lehibe mamela ny fidirana amin'ny FB sy Twitter avy amin'ny birao / solon'ny mpiasa. Misy olana isan-karazany momba ny fiarovana, ny loza ateraky ny laza ary ny varotra vokatra azo atao amin'ny fanaovana izany. Angamba izany no mitarika ny fitomboan'ny telefaona marani-tsaina mba hidirana amin'ireo fitaovana ireo, rehefa tsy voahidy amin'ny firewalls amin'ny Aterineto orinasa 'traditional'?
Avy amin'ny famintinana slideshare dia nisafidy ny toro-hevitra #8 aho izay miresaka mazava tsara amin'ny fomba fijery miompana amin'ny vokatra matetika ataon'ireo mpivarotra teknolojia b2b. Ireo valim-panontaniana fito voalaza dia manondro ireo hafatra ara-barotra alefa amin'ny alàlan'ny mailaka, saingy azo ampiharina amin'ny endrika marketing votoaty hafa izay manampy amin'ny fanabeazana sy fikolokoloana fifandraisana ara-barotra azo atao amin'ny olona tena izy sy velona. Tsarovy ireo!
Satria mihamitombo ny finday (sy ny takelaka) eo amin'ny tontolon'ny orinasa, toa ny ampahany fohy sy mahasarika “infografika” no mety ho lasa fomba tiana hisarihana ny maso sy ny sofina amin'ny fifanakalozam-baovao voarefy kokoa sy amin'ny antsipiriany, ohatra, webinars sy votoaty an-tsoratra.
Betsaka ny tokony hoeritreretina. Misaotra ny fizarana.